Sajhasabal.com | Homeउपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरामै हर्निया देखी हाईड्रोसिलको सल्यक्रिया शुरु
ललित बोहरा/बैशाख २८, डडेल्धुरा । डडेल्धुरा जिल्लामा पहिलो पटक हाईड्रोसिल देखि हर्निया र एपेण्डीसाईटको उपचार शुरु भएको छ ।
उप क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरामा एमडिजिपि डा.जिेतेन्द्र कडेल आएपछि हाईड्रोसिल, हर्निया सहितको सल्यक्रिया गरी उपचार सेवा शुसरु भए पछि अस्पताल एक नयाँ आयाम थपीएको छ । विगतमा यी रोगको उपचारका लागि यस क्षेत्रका नागरिकले कैलाली वा भारत जानु पर्ने वाध्यता थियो ।
उपक्षेत्रिय अस्पतालमा सल्यक्रियाबाट उपचार सम्भव भए संगै यस क्षेत्रका विरामीका लागि राहत पुगेको स्थानिय वासीन्दाले वताएका छन् । वैशाख महिना देखि यी सम्पुर्ण रोगको उपचार हुन थालेको उप क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरा विकास समिति अध्यक्ष लक्ष्मण सिहले वताएका छन ।
वैशाख महिनाको २ गते देखी हाल सम्म ६ जना गर्भवती महिलाको सिएस गरिएको, १ जनाको हाईड्रोसिलको उपचार र २ जना हर्नियाको उपचार गरिएको उप क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराले जनाएको छ ।
उप क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरामा यी रोगको उपचार हुन थाल पछि सुदुरपश्चिमका ७ पहाडि जिल्लाका विरामीलाई उपचार गराउन सहज भएको एमडिजिपि डा. कडेलले वताएका छन । यसैगरी दुई दर्जन माईनर सल्य क्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
डा. कडेल आउनु भन्दा पहिले माईनर सल्यक्रियाका लागि समेत विरामी तराईका जिल्ला वा भारत जान वाध्य हुने गरेका थिए । उप क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरामा अझै सेवा सुविधा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको यस क्षेत्रका स्थानियको माँग छ ।
यसैगरी उप क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरामा तिन दिन सम्म संचालन भएको पाठेघर सम्वन्धीको सिविर आईतवार सम्पन्न भएको छ । तिन दिन सम्म संचालन भएको सिविरमा १२ जनाको पाठेघरको सल्यक्रिया, गरिएको छ भने २५ जनालाई औषधी सहित सल्लाह सुझाव दिइएको उप क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराले जनाएको छ ।